यामाहाका टू ह्वीलर्स स्टाइल, पावर र पर्फर्मेन्सका आधारमा ग्राहकको रोजाइमा छन् | गृहपृष्ठ
बुधबार, कार्तिक २८, २०७५
Home यातायात यामाहाका टू ह्वीलर्स स्टाइल, पावर र पर्फर्मेन्सका आधारमा ग्राहकको रोजाइमा छन्
on: २१ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०९:२७ यातायात 48 views
यामाहाका टू ह्वीलर्स स्टाइल, पावर र पर्फर्मेन्सका आधारमा ग्राहकको रोजाइमा छन्
एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेजले नेपाली बजारको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी विभिन्न भेरियण्टका मोटरसाइकल र स्कुटर विक्री गर्दै आएको छ । स्कुटरमा यामाहाको फेसिनो, रे जेडआर, रेजी र अल्फा गरी चार मोडेल छन् । मोटरसाइकलमा एफजेड–एस एफआई, आर १५, एसजीआरआर, सलुटो र प्राविधिक रूपमा उच्चस्तरीय आर ३ उपलब्ध छन् । यामाहाले गत वर्ष साउनमा नेपाली बजारमा २५० सीसी क्षमता भएको एफजी २५ ‘द ष्ट्रिट फाइटर’ सार्वजनिक गरेको थियो । अहिलेसम्मको छोटो अवधिमै एफजी २५ बाइक ४ हजारभन्दा बढी विक्री भइसकेको छ । यो छोटो समयमै सबैभन्दा बढी खोजिएको मोटरसाइकल बन्न सफल भएको कम्पनीको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा यामाहाका मोटरसाइकल तथा स्कूटर र नेपालमा टू ह्वीलर्स बजारको वर्तमान अवस्था, समस्या र सम्भावनाबारे कम्पनीका असिष्टेण्ट जनरल म्यानेजर (मार्केटिङ तथा बिजनेश डेभलपमेण्ट) प्रदीप पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका मदन लामिछानेले गरेको कुराकानी :
यामाहाको एफजी सिरिजका बाइकबारे जानकारी दिनुहोस् न ?
यामाहाका बाइकमा रहेको एफजी सिरिज लोकप्रिय भइरहेको छ । अहिले १५० सीसी सेगमेण्टमा एफजीएस एफआई सिरिज नम्बर वान छ । यस सिरिजअन्तर्गतका बाइकको पर्फरमेन्स, फ्युल इञ्जेक्शन (एफआई) टेक्नोलोजीका कारणले धेरैको रोजाइमा परेको हो । एफआई टेक्नोलोजीले इञ्जिनमा इन्धन कति मात्रामा जानुपर्ने हो, त्यसको निर्धारण गर्छ । चाहिने भन्दा बढी या कम फ्युल बर्न भयो भने पर्फरमेन्स राम्रो हुँदैन । त्यसैले, एफआई टेक्नोलोजी भएको बाइकको माइलेजका साथै पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ । यामाहाको १५० सीसी बाइक स्टाइलिस हुनुका साथै पर्फर्मेन्स राम्रो भएका कारणले योङस्टरबीच लोकप्रिय छ । गत साउनमा एफजी २५० सीसीको बाइक लञ्च गरेका थियौं । अहिलेसम्म हामीले ४ हजारओटा एफजी २५० सीसी बाइक विक्री गरिसकेका छौं । यो सिरिजको विक्री पनि एकदमै बढ्दो छ ।
स्कूटर सेग्मेण्टमा यामाहाले आफ्नो बजार विस्तार कसरी गरिरहेको छ ?
यामाहाका स्कूटर स्टाइलिश र कम्फर्टेबल हुन्छन् । हालसालै स्टाइल, कम्फर्ट, माइलेज, पीकअपलगायत विशेषतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजारमा उपलब्ध विभिन्न ब्राण्डका स्कूटरप्रति ग्राहकको रुचिबारे एउटा बृहत् अनुसन्धान गरिएको थियो । नेपालको प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था मिडियारिचले गरेको रिसर्चमा चालकले यामाहाका स्कूटरको ‘स्टाइल’ र ‘कम्फोर्ट’लाई सबैभन्दा बढी मन पराएर १ नम्बरमा राखेका छन् ।
कम्पनीले दिँदै आएको विक्रीपछिको सेवाबारे बताइदिनुहोस् न ?
हामीले विक्रीपछिको सेवालाई थप विस्तार र सहज बनाउने काम गरिरहेका छौं । अहिले हामीले देशभर ७० ओटा आउटलेटबाट सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स (थ्री एस) सुविधा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । हामीले अबको ५ वर्षभित्र सबै शोरूमको संरचना बढाई अत्याधुनिक बनाउँदै छौं । हामीले ए वान, ए टू र ए थ्री गरी तीन स्तरमा शोरूम स्तरोन्नति गर्दै छौं । यो आवमा हामीले ६ ओटा शोरूमको स्तरोन्नति गरेका छौं । आगामी वर्षमा भने हामी फुल फेजमा एन्फाष्ट्रक्चर डेभलपमेण्टमा जान्छौं ।
यामाहाका टू ह्वीलर्सको विशेषता के हो ? नेपाली बजारमा यसको माग कस्तो छ ?
यामाहाका टू ह्वीलर्सलाई स्टाइल, पर्फर्मेन्स र पावरका आधारमा ग्राहकले रोज्ने गरेका छन् । समग्रमा यामाहाका टू ह्वीलर्स पर्फर्मेन्स राम्रो मानिन्छ । यामाहाले युवाहरूलाई लक्षित गरी टू ह्वीलर्स बजारमा ल्याएको छ । हाम्रो मोटरसाइकल १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका मानिसले बढी किन्ने गरेको पाइन्छ । यसमा पनि २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहले धेरै किनेका छन् । यामाहा टू ह्वीलर्सको विक्री वार्षिक करीब ३० प्रतिशत बढिरहेको छ । १२५ सीसीको यामाहाको सलुटो मोटरसाइकल तराई क्षेत्रमा धेरै विक्री भइरहेको छ । १२५ सीसी सेग्मेण्टमा सलुटोले राम्रो बजार लिँदै गएको छ । नेपालका मुख्य बजार काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज, बुटवल र इटहरी क्षेत्रबाट धेरै सङ्ख्यामा टू ह्वीलर्सको विक्री हुन्छ । बजारमा टू ह्वीलर्स किन्दा नयाँ टेष्ट, स्टाइल, कमफर्ट, नयाँ टेक्नोलोजिलगायत पक्षमा मानिसले बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले, एफजी सिरिजले राम्रो बजार लिइरहेको छ । अहिले बाग्मती र गण्डकी अञ्चलमा धेरै सीसीका बाइकको माग राम्रो छ ।
नयाँ वर्ष २०७५ लाई लक्षित गरेर के कस्ता अफर ल्याउनुभएको छ ?
हामीले नयाँ वर्ष २०७५ लाई लक्षित गरी नयाँ ग्राहक योजना ल्याएका छौं । ‘आमन्त्रण’ नाम रहेको यो योजनामा यामाहा ब्राण्डका मोटरसाइकल र स्कूटर खरीद गर्ने ग्राहकले एउटा स्क्र्याच बूक पाउँछन्, जसमा ५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म ‘स्योर सट डिस्काउण्ट’ र शतप्रतिशतसम्म ‘क्यास ब्याक’ पाउँछन् । यसपटक हामीले स्क्र्याच कार्ड होइन, स्क्र्याच बूक ल्याएका छौं, जसलाई कोट्याएर ग्राहकले विभिन्न उपहार र पुरस्कार पाउन सक्छन् । स्क्र्याच बूकमा पाँचओटा पाना हुन्छन् । यसमा ग्राहकले ५ हजारदेखि ५० हजारसम्मको ‘स्योर सट डिस्काउण्ट’, बच्चा र आफूले माया गर्नेका लागि उपहार, सर्भिस डिपार्टमेण्टको तर्फबाट उपहार र शतप्रतिशतसम्म ‘क्यास ब्याक’ पाउनेछन् । यसैबीच, यामाहाले ‘सेल्फी खिचौं न’ नामक फेसबूक कण्टेष्ट शुरू गरेको छ, जसमा ग्राहकले यामाहा शोरूममा रहेको ‘आमन्त्रण’लाई ब्याकग्राउण्डमा राखेर खिचिएको सेल्फीलाई ‘एसयामाहा’को फेसबूक पेजमा पठाउनुपर्नेछ । यामाहाको नयाँ वर्ष योजना चैत १ देखि ३१ वैशाखसम्म चल्नेछ ।
नेपालको टू ह्वीलर्स बजारको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
समग्र टू ह्वीलर्सको वर्षेनि बढिरहेको छ । मोटरसाइकलको बजारमा गत आवभन्दा यो आवमा केही कमी आएको छ । तर, स्कूटरको बजार भने बढिरहेको छ । आगामी दिनमा मोटरसाइकलभन्दा स्कूटरले धेरै बजार लिन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, हामी पनि नयाँ कलर ल्याएर स्कूटरको प्रमोशन गर्न लागिरहेका छौं । सरकारले सडक, पुललगायत पूर्वाधार तीव्र गतिमा गर्न सकेको छैन । सडकमा जामको समस्या बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक यातायातमा भीडभाडका कारण सहज तरीकाले यात्रा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अहिले काठमाडौंदेखि नजीकका ठाउँमा पनि मानिसले मोटरसाइकलकै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ ।
अटोलोनमा सरकारले कडाइ गरेपछि त्यसको असर व्यवसायमा कत्तिको परेको छ ?
अटोलोनकै कारण टू ह्वीलर्सको बजार खासै प्रभावित भएको छैन । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने करीब ८० प्रतिशत ग्राहकले नगद तिरेर टू ह्वीलर्स किनिरहेका छन् । २० प्रतिशत फाइनान्समा किन्नेहरू पनि धेरै अफिसमा काम गर्नेहरू छन् । उनीहरूलाई फाइनान्स गर्न खासै कठिनाइ पर्दैन । फोर ह्वीलरको मूल्य धेरै पर्ने भएकाले यसको असर बढी परे पनि टू ह्वीलर्समा भने खासै परेको छैन । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा अटोलोन बैङ्कहरूले दिइरहेका छन् । यसलाई घटाएर ६/७ प्रतिशतमा झार्न सक्ने हो भने फाइनान्समा किन्नेको सङ्ख्या अझै बढ्ने थियो ।
कम्पनीका योजना के–के छन् ?
यामाहाका अन्य मोडेलका साथै फेसिनोले बजारमा लोकप्रियता पाइरहेको छ । हामीले अबको २–३ साताभित्रै फेसिनो मोडलका स्कूटर थप नयाँ कलरमा बजारमा ल्याउँदै छौं । बजारमा आउन लागेको नयाँ कलरमध्ये गोल्डेन कलरले धेरैलाई आकर्षित गर्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं । हामीले आगामी महीना फेजर २५ बाइक बजारमा ल्याउन लागेका छौं । त्यस्तै, स्टाइल, कम्फर्टमा आरवान फाइभले बजारमा राम्रो लोकप्रियता पाइरहेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले केही समयपछि भर्जन थ्री बजारमा ल्याउन लागेका छौं । त्यस्तै, हाम्रो धेरै बिक्ने एफजीएस एफआईलाई डबल डिस्कमा ल्याउँदै छौं ।
यामाहा टु ह्वीलर मोटर साईकलको उत्तरोत्तर प्रगति होस् ग्राहकको मागलाई परिपुर्ति गर्न कम्पनि सदा चिन्तित बन्न सकोस्, प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनिको दॉजोमा शक्तिशाली बनेर ग्राहकको मन जित्न सकोस् नम्बर वन रोजाईमा त यसै नै परेकै छ अझ यो भन्दा पनि माथी पुगेर वाह ! यमाहा भन्ने कुरा सबै प्रयोगकर्ताको मुख बाट यस्को प्रशंसा मात्र सुन्न पाईयोस् ।
हस्तकला निर्यात गर्ने उद्योगीलाई ५ वर्षसम्म अनुदान
चार कम्पनीको साधारणसभा बिहीवार
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्कको हकप्रद बाँडफाँट, चुक्तापूँजी पुर्‍याउन थप ३ अर्ब २९ करोड आवश्यक
फ्ल्पिकार्ट सीईओको राजीनामा
ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमन सम्झौताको मस्यौदामा ’सहमति’
गहुँको बिउमा ४० प्रतिशत अनुदान
साङ्ग्रिला डेभलपमेण्ट बैङ्कको नाफा घट्यो
सानिमा माई हाइड्रोपावरको नाफामा २८% वृद्धि
महालक्ष्मी विकास बैङ्कको नाफा १० करोड ५६ लाख
गुराँस लघुवित्तको निक्षेप सङ्कलनमा ३ गुणा वृद्धि